EYONA NDAWO IHAMBA PHAMBILI YEPHULI - UHLOBO
Nazi i-12 zezona ziFama eziPhambili eziPhezulu ngaphandle apho
Kwiminyaka ukusukela ngoku, siza kukhumbula phakathi ku-2010s njengexesha leephuli ezidadayo. Ezi zinto ziphezu kwebhlogosphere, kwaye nkqu utaylor Swift ungene ngokuqhubekayo. Ukuba unqwenela ukuhlala kwakhona ebuntwaneni bakho kwi-inflatable eyakho, ungakhangeli ngapha nangapha kokujikeleza kwe-12 lelona phuli lilungileyo lokudada phaya.
Ngokwesiqhelo ngekhe ndikhuthaze ukuxutywa kwepitsa kunye namanzi, kodwa okwahlukileyo yile pizza yesilayidi esimile njengeplanzi. Ungathenga enye yokulalana ngokwahlukeneyo, okanye, ukuba unephuli enkulu (okanye umlambo) kunye nabahlobo abaninzi, intwasahlobo yepayi. Ipitsa yesilayidi edadayo, $ 55 ukusuka Abaphuma ngaphandle ezidolophini .
(Ityala lemifanekiso: IAmazon )
Oku idada emhlophe yedada wayenjalo eyona yaqala konke , kwaye inokuba yeyakho ukusuka IAmazon nge $ 79.90.
Abasebenzi beTaylor Swift bakhetha i-floats ukusuka 'kumgangatho wokuntywila' kumenzi weFunboy. Inguqulelo yabo yedada emhlophe ayisasebenzi, kodwa usengakwazi ukuhambisa uNatalie Portman ngale nto yokuntywila kwamnyama. Ukudada kwamachibi amnyama edada, $ 89 ukusuka Funboy .
Kukho le pegasus echibini lokudada, elifumaneka kwi Funboy $ 89.
Okanye zama le dragon enkulu yaselwandle, $ 40.50 ukusuka IAmazon .
(Ityala lemifanekiso: Abaphuma ngaphandle ezidolophini )
Ukuba ukhetha ukudada ngokuntywiliselwe emanzini endaweni yokukhwela ngaphezulu, mhlawumbi iphuli yeepretzel idada ($ 29 ukusuka Abaphuma ngaphandle ezidolophini yeyakho.
intsingiselo yokomoya yama-711
I-flamingo edadayo enokuntywila, $ 70 ukusuka Ilanga (kwaye wabonwa kweli qela likhulu lechibi ukusuka Iswekile kunye neCharm ).
Iiphuli ezimbini zenyoka edadayo, $ 29.55 ukusuka IAmazon .
(Ityala lemifanekiso: I-Nordstrom )
Ayisiyiyo ncam iflothi, kodwa ngubani ongadingi ibhola enkulu yaselwandle? (Lowo ngumbuzo ongathandabuzekiyo, kodwa ukuba ubunokuzibuza, impendulo ithi: akukho mntu.) Ibhola ekhatywayo ye-Sunnylife 'XL, $ 34 ukusuka I-Nordstrom .
La echibini le alligator liyadada (njengoko kubonisiwe kumfanekiso osuka Emva kwexesha ngeBlog ) Yindalo yakudala. Ndandinayo enye yazo echibini lobumelwane eLafayette, eLouisana, malunga nowe-1990, kwaye yayiyeyona nto inkulu eyakha yakho. Ukukhwela i-Alligator, $ 25 ukusuka IAmazon .
(Ityala lemifanekiso: IBrookstone )
I-hammock yokudada yokudada emanzini, $ 59.99 ukusuka IBrookstone . (Ukudibanisa iisuti zokuqubha kubuyisiwe kodwa akufuneki.)
(Ityala lemifanekiso: UHammacher Schlemmer )
Kutheni ndiqhubeka ndibona u-1111
Le yindawo yokudada yokugqiba yonke into edadayo. Ngokwenyani, uya kudinga ichibi, kuba le nto inkulu nje. Iindaba ezimnandi zezokuba ixhasa ukuya kuthi ga kubantu abasibhozo. Ukuthambisa i-jungle edadayo, $ 2,000 ukusuka UHammacher Schlemmer .
Njengombhali oMkhulu kuNyango lweZindlu, uNancy wahlula ixesha lakhe phakathi kokujonga imifanekiso emihle, ebhala malunga noyilo, kunye nokufota izindlu ezinesitayile ngaphakathi nakwi-NYC ejikelezileyo. Ayisiyo gig embi.
Ukulungiswa njani kunye nokuLungiswa kweNdonga eziDiliziweyo kunye nePeyinti
Idepho yasekhaya ngoku ibonelela ngeenkonzo zoyilo lwangaphakathi
Kukho uVictorian oMlilo oBlack oThengiswayo eTexas- kwaye inePhuli yokuDada ngokuLingana
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle banekhaya elitsha leVeki
Yintoni ukugqithisa nokuba yintoni ekufuneka uyiphephe
Ndijike igumbi lam lokulala ndaya kwiTheatre yaseKhaya eKhaya - Nantsi indlela onokuthi ngayo, nawo
Ithegethi yeNtengiso yangoLwesihlanu oMnyama ilapha, kwaye iidili ziqala kwangoko kwangomso
Uyifaka njani iMbane yokuKhanya kweCloset
I-3 elula yoLungiso lweeLights eziPhezulu zoPhahla
Imfihlo yeProjekthi yokuLungisa: Uyibeka njani i-Bead egqibeleleyo yeCaulk ngokukhawuleza nangokucocekileyo, ngalo lonke ixesha
Uququzelela njani iifoto zedijithali
Iifoto eziDume kakhulu zeNdlu ukusuka ngo-2019 kwiPinterest
Fumana umbala: Uyidaya njani iigusha
Abaphuculi beeDolophu basungula ikhathalogu yekhaya
Intsingiselo yenani leengelosi ezili-1111
Ithetha ntoni i-101010
lithetha ntoni inani u-999
Intsingiselo yengelosi inombolo 1212
Ithetha ntoni i-111
lithetha ntoni inani u-111
Ndihlala ndibona i-111
yintoni intsingiselo yokomoya engama-555